[Tuesday, January 2nd, 18] :: Wafdi dowladda ka socda oo tagay Beledxaawo
Beledxaawo (RH)- Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa gaaray magaalada Beledxaawo ee gobalka Gedo, halkaasoo ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay markii ciidamada Kenya ay damceen qeybo ka mid ah magaalada in ay ku daraan dhinaca iyo xuduudda Kenya.
Wafdiga waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka.
Wasiirka ayaa haddaba BBC-da uga warramay waxa ay ku soo arkeen magaaladda iyo xiisadda ka jirta.
Wasiirka ayaa sheegay in iyaga iyo wafdigooda ay u kuurgaleen xaaladda magaalada gaar ahaan xiisadda ka jirta oo ku aadan in Kenya ay damsan tahay in ay ku darto magaalada Beledxaawo.
Wasiirka ayaa ka gaabsaday arrinta ku saabsan in Kenya ay ku soo duruqday dhinaca iyo magaalada balse waxa uu sheegay in waxa ay soo arkeen uu ku jiro dhismaha laga dhisayo xadka iyo halka uu ka billaabanayo iyo waxa ka jira cabashada dadka magaalada.
Dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay inay soo faragaliso xiisadda ka taagan Beledxaawo
Beledxawo Maxaa Madiyaa?
Waxa uu sheegay in wafdiga uu hoggaaminayo ay ku jireen dad khuburo ku ah arrimaha xuduudaha iyo guddiga xuduudaha ee baarlamaanka isla markaanna marka ay dib ugu laabtan Muqdisho ay faah-faahin doonaan waxa ay soo arkeen.
Wasiirka ayaa sheegay in khilaafka ka jira Beledxaawo gaar ahaan is dhexgalka labada magaalo ay kala hadli doonaan Kenya maadama iyagu ay xaq u lee yihiin arrinta ka taagan magaalada.
Wasiir Juxa ayaa tilmaamay in wax dhib aysan ka jirin magaalada Beledxaawo.
posted on Tuesday, January 2nd, 18